Guuldareysiga Ganacsiga: Xiddiga Xiddiga ee Intel ... Jilaa | Martech Zone
Guuldareysiga Ganacsiga: Xiddiga Xiddiga ee Intel… Jilaa
Sunday, May 17, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii uhoreysay ee aan arko xayeysiinta cusub ee Intel, waxaa igu kalifay… 20 sano waxa kaliya ee aan ka ogaa Intel waxay ahayd astaanta, codka, iyo Blue Man Group. Guji thru haddii aadan arkin kan Shirkadda Intel Star Commercial:
Ugu dambeyntii! Shirkad weyn oo tiknoolajiyad ah oo aan ku gabanayn astaanta suuqgeynta, hal ku dhig ama olole gimmicky ah. Laakiin waa hoog, waa ma aha kiiska - Intel waa cajiib ganacsi cusub ayaa laga duubay jilaa badalaya shaqaalihii dhabta ahaa - Ajay Bhatt.
Maxaa fursad lumay! Waa olole fantastik ah iyo ganacsi aan caadi aheyn… laakiin iyada oo aan la helin shaqaale dhab ah oo ka dhex muuqda, si fudud 'uma dhawaaqeyso' run. Shaqo fiican oo ku saabsan shakhsiga shakhsiga ah ee shakhsiga ah, sidoo kale. Sawirka oo daaran Taariikh nololeedka Ajay Bhatt midna ma leh Ding, ding, Dhuux dheelitirka!
10 Furayaasha Guusha ee Ganacsiyada qaatay Warbaahinta Bulshada
Iskuduwaha CSS ee iPod iyo iPhone Safari
Marka waa maxay - waad la yaabtay in xayeysiinta ay ku jiraan jilayaal?
Waxaan layaabay in xayeysiis si toos ah u iftiiminaya shaqaalahaaga… oo wata magaca shaqaalaha 'REAL' iyo guulaha dhabta ah… uu adeegsanayo jilaa. Sidee ayey u fiicnaan laheyd inuu lahaado Ajay Bhatt dhabta ah ganacsiga, oo ay wehliyaan funaanado waaweyn oo isaga ah sidoo kale!
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga Dan, Jim!
Sidoo kale waa wax lagu qoslo in Ajay uu u egyahay jilaaga (shaaribada dhinac)).
Waan kula socdaa Doug, xilli da 'sax ah, Intel waxay ahayd inay doorto inay ahaato mid sax ah. Jacaylka fikradda, dadka caqliga badan, waxay noqon karaan xiddigo dhagxaan ah oo ku saleysan guulaha ay gaareen, ee ma ahan muuqaalkooda.
Laakiin farriintu run uma dhawaaqeyso. Waxay qiimeeyaan AJay, laakiin ma doonayaan inuu isaga kamarad ku qoro, oo ay kireystaan ​​jilaa dhalaalaya, laakiin madax madhan oo madhan inuu la ciyaaro.
Waxaa laga yaabaa in Ajay uusan dooneynin inuu ka mid noqdo ganacsiga. ma weydiisay isaga?
oo ha iigu yeedhin Jim.
Waan ka xumahay taas! La saxay (waxaan qabaa). Haddii Ajay uusan rabin inuu ka mid noqdo ganacsiga, waxaan hubaa inay jiraan xiddigo badan oo teknoolojiyad ah oo Intel jooga oo intaas ku filnaan lahaa.
Miyaan kuugu yeedhnaa Mr Liarpants oo ka socda Suuqgeynta Intel? 🙂
Jun 1, 2009 saacadu markay ahayd 7:45 AM
Waa wax lagu farxo daawashada xayeysiiska laakiin haa waxaan ku raacsanahay in dadka dhabta ah ay ahayd in la soo bandhigo… .. kastoo tan iyo markii ay adagtahay in wax laga qabto, qof walba kuma haboona karo doorka iyo dalabka filim xayeysiinta ah…
Ma jiraan arrimo….
Aug 16, 2009 at 12: 23 AM
Waxaan la yaabanahay haddii Gordon Moore uu waajib ku noqon lahaa.